15 Ndị ọnaụtụ+ niile na ndị mmehie+ nọ na-abịakwute ya ka ha nụrụ okwu ya. 2 Ya mere, ma ndị Farisii ma ndị odeakwụkwọ nọ na-atamu, sị: “Nwoke a na-anabata ndị mmehie, sorokwa ha na-eri ihe.”+ 3 O wee nye ha ihe atụ a, sị: 4 “Ònye n’ime unu nke nwere otu narị atụrụ, ka ọ ga-abụ, ọ bụrụ na otu n’ime ha efuo, ya aghara ịhapụ iri itoolu na itoolu n’ala ịkpa gaa chọwa nke ahụ furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya?+ 5 Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-ekukwasị ya n’ubu ya ma na-aṅụrị ọṅụ.+ 6 Mgbe ọ laruru ụlọ, ọ na-akpọkọta ndị enyi ya na ndị agbata obi ya, sị ha, ‘Soronụ m ṅụrịa ọṅụ, n’ihi na achọtawo m atụrụ m nke furu efu.’+ 7 Ana m asị unu na otú ahụ ka a ga-enwe ọṅụ dị ukwuu n’eluigwe n’ihi otu onye mmehie nke chegharịrịnụ+ karịa n’ihi ndị ezi omume iri itoolu na itoolu, ndị nchegharị na-adịghị mkpa.+ 8 “Ma ọ bụ, olee nwaanyị nke nwere mkpụrụ ego drakma iri, nke ọ ga-abụ, ọ bụrụ na otu mkpụrụ ego drakma efunahụ ya, ya aghara ịmụnye oriọna ma zachaa ụlọ ya, chọọkwa ya nke ọma ruo mgbe ọ chọtara ya? 9 Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-akpọkọta ndị inyom bụ́ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya, sị, ‘Soronụ m ṅụrịa ọṅụ, n’ihi na achọtawo m mkpụrụ ego drakma funahụrụ m.’ 10 Otú ahụkwa, ana m asị unu, ndị mmụọ ozi Chineke ga-enwe ọṅụ n’ihi otu onye mmehie nke chegharịrịnụ.”+ 11 O wee sị: “Otu nwoke nwere ụmụ ndị ikom abụọ.+ 12 Nke nta n’ime ha wee sị nna ya, ‘Nna m, kee ihe i nwere, nye m nke ruuru m.’+ Ya mere, o keere ha ihe o ji biri.+ 13 E mesịa, mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, nwa ya nwoke nke nta chịkọtara ihe niile gawa mba ọzọ nke dị anya. O mefusịrị ihe o nwere n’ebe ahụ site n’ibi ndụ ịla n’iyi.+ 14 Mgbe o mefusịrị ihe niile, oké ụnwụ dara ná mba ahụ dum, ọ malitekwara ịnọ n’ụkọ. 15 Ọ gara ọbụna binyere otu n’ime ụmụ amaala mba ahụ, onye ahụ wee ziga ya n’ubi ya ka ọ na-azụ ézì.+ 16 Ọ na-agụkwa ya agụụ ka o were ụgbụgbọ mkpụrụ osisi karọb nke ézì na-eri, rijuo afọ, ma ọ dịghị onye na-enye ya ihe ọ bụla.+ 17 “Mgbe anya doro ya, ọ sịrị, ‘Lee ọtụtụ ndị nna m goro ọrụ, bụ́ ndị nwejuru ihe oriri enweju, ma ụnwụ na-achọ igbu m ebe a! 18 M ga-ebili gakwuru+ nna m, sị ya: “Nna m, emehiewo m Chineke,* mehiekwa gị.+ 19 Erukwaghị m eru ka a kpọọ m nwa gị. Mee ka m bụrụ otu n’ime ndị i goro ọrụ.”’ 20 Ya mere, o biliri gakwuru nna ya. Mgbe ọ ka nọ n’ebe dị anya, nna ya hụrụ ya ma nwee ọmịiko. O wee gbara ọsọ gaa dakwasị ya n’olu ma jiri nwayọọ susuo ya ọnụ. 21 Nwa ya nwoke wee sị ya, ‘Nna m, emehiewo m Chineke, mehiekwa gị.+ Erukwaghị m eru ka a kpọọ m nwa gị. Mee ka m bụrụ otu n’ime ndị i goro ọrụ.’+ 22 Ma nna ya sịrị ndị ohu ya, ‘Ngwa! chịpụtanụ uwe mwụda nke kasị mma, chịrịkwanụ ya yiwe ya,+ gbanyenụ ya ọla n’aka,+ yiwekwa ya akpụkpọ ụkwụ n’ụkwụ. 23 Kpụtanụ nwa oké ehi mara abụba,+ gbuo ya ka anyị rie ma mee onwe anyị obi ụtọ, 24 n’ihi na nwa m nwoke a nwụrụ anwụ ma dị ndụ ọzọ;+ o furu efu, e wee chọta ya.’ Ha wee malite ime onwe ha obi ụtọ. 25 “Ma nwa ya nwoke nke okenye+ nọ n’ubi; mgbe ọ na-alọta ma rute ụlọ nso, ọ nụrụ ụda egwú a na-eti na ụda egwú a na-agba. 26 Ya mere, ọ kpọrọ otu n’ime ndị na-eje ozi ma jụọ ya ihe ihe ndị a pụtara. 27 O wee sị ya, ‘Nwanne gị+ nwoke alọtawo, nna gị+ gbukwara nwa oké ehi mara abụba, n’ihi na ọ lọtara n’ahụ́ ike.’ 28 Ma o were iwe, o kweghịkwa abanye n’ụlọ. Nna ya wee pụta ma malite ịrịọsi ya arịrịọ ike.+ 29 Ọ zara nna ya, sị, ‘Agbaworo m gị ohu ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọ dịbeghị mgbe m mebiri ihe i nyere n’iwu, ma ọ dịbeghị mgbe i nyere m nwa ewu ka mụ na ndị enyi m mee onwe anyị obi ụtọ.+ 30 Ma ozugbo nwa gị nwoke a+ nke ya na ụmụ nwaanyị akwụna+ richara ihe i ji biri lọtara, i gbuuru ya nwa oké ehi mara abụba.’+ 31 O wee sị ya, ‘Nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ihe niile bụ́ nke m bụkwa nke gị;+ 32 ma anyị kwesịrị ime onwe anyị obi ụtọ, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na nwanne gị nwoke a nwụrụ anwụ ma dịrị ndụ ọzọ, o fukwara efu, e wee chọta ya.’”+
Otú e si dee ya n’asụsụ Grik bụ “eluigwe.”